Gabay Xiiso Badan”GEEL VS KALUUN”.*Dhagaysi Wacan”. | Allgalgaduud News	Thursday, June 20th, 2013	Home
Gabay Xiiso Badan”GEEL VS KALUUN”.*Dhagaysi Wacan”.
Published on February 22, 2013 by galgaduud · 8 Comments
Gabaygan ayaa waxa uu dhexmaray laba nin oo si aad ah isugu tuur tuura kaftanka oo dhalasho ahaan kasoo jeeday Beesha Majeerteen Iyo Beesha Ogaadeen kana wada tirsanaa Ciidamada Xooga Dalka Soomaaliyeed oo magacyadooda la oran jiray Yasiin Geelle Iyo Maxamed Axmed Qaran.*Dhagaysi Wacan*.
saadaam says:	February 22, 2013 at 5:33 pm	kkkkkkkkkkkk gabayga waxbadan buu muujinayaa ninkii fahmana waa uu fahmay kaan fahmina loo fasiri maayo.
Reply »	Kowtame says:	February 22, 2013 at 9:51 pm	Gabaygaan rag saaxiibbo ah oo kaftamaya ayuu dhexmaray. waxaan aad uga xumahay in gabayga uu duubay mid ka mid ah ragga is haya marka waxaan oran karaa in halkaas miisaankii maansadu ku dheelliyey. Aad baan ugu qoslay murtida kaftanka badan!
Halkaas waxaa iiga caddaaday in ragga ehelka ahi aysan oggolayn in midka kale ee ehelkooda ah ee ka maqan aan meel looga dhicin. Dhaqankii horena sidaas buu ahaa waligeenna xumaanta mid kale isku raaci mayno oo dad uun wax garanaya ayaa jiri doona!
Reply »	kaltuumo says:	February 22, 2013 at 5:34 pm	dadkana aa la leeyahay meey heshiiyaan waaba dad amr hore isa soo cunay oo aan waxba isu soo reebin aloow ceebteena astur.
Reply »	kabtan kus says:	February 22, 2013 at 5:35 pm	kaltuumo quraan ma leeysu aqrinaa, dadkaan anagey noo kala tar tami jireen hadana waad arkeysaa sida loo hadlooyo iyo sida loo hanjabooyo.
Reply »	wiil sade says:	February 22, 2013 at 5:36 pm	allgalgaduud shaqadiina waaba cajiib xage ka kenteen gabaygan?
Reply »	sade man says:	February 22, 2013 at 5:39 pm	Gbaygaan waxaa tiriyay Axmed Maxamed Shirwac Dhuurcas.april 1997kii waxaa layiraa gabayga magciisa shilkii reer kismaanyo;
Shuqul gabay baroow wanigii sheekadiis dhigaye
Wanigii shakalka iyo ku xiray shabaq aan sideen.
Shib waataan kairi maansadaan sheeqa ku ahaa.
Teer iyo shir qaran waa teey iga shareernaaye.
Waatii dad badan iga shakiyay ina shuqeyeene.
Mid shidkiisi galay caawo aan shiinka ka higaadsho.
Shalaay waa ku iman dhiigayag qoom shafecsaday.
Ma shifeysan jirin godab ninkii nag shaqestaaye.
Qabilkii shar noo maamulaa guul mashiiqsado.
Shido iyo xuman kam helno iyo shir iyo dulaan.
Mashuqeeyno deegamadaan sheeda wad naale.
Sharaf baan wax kula qeybsanaa shacabka soomaali.
Intii nabad lasheel sheelin karo waan u shin tirinaa.
Dabka nalgu shido malinkuu shuuqa damin waayo.
Sheekad markii la isku dhaho lag shil roonaaye.
Ayaan sida shamsad iyo dayax shaac u noqonaaye.
Dad ninkii shanshad buuxsantay iyo kibir ubeen sheego.
Dharaar shaahid loo wada yahaan kag shaneynaa.
Shisheeye iyo sokeeyab horuu nooga marg sheegi
Cadkayag nin shiiqsad la waa shuunkas toos yahay.
Shaf nalooma tuma goob dagaal am shihiid yaale.
Shahaado iyo cadeen waxaan laheen sheego maqaane.
Libin loo sharuutamay aneey shir iga racdaaye.
Inaan been ku shomeen ragbaa iiga shaahida.
Waxaan gabyga aad ugu sharaxy uguna shiidaaday..
Damiin baan wax ugu shegayaa shaqlka waaween.
Shilkii reer kismaanyo iyo kadhacay shacabka reer waamo.
Shukanta iyo ragii lagal dagay shirarka baabuurta.
Oo dumarka lagu shiish baray oo ubadku shandheeyay.
Shilalkii ladhigay boor dage iyo shiradii loo toogtay.
Shanqari kam danbeen baa layiri wali shabaxii.
Majerteen shantaan bari haduu farax ku sheekeystay.
Sharibad haduu daray lib aan waligii loo sheegin.
Shin hadeey noqdeen wax wadnah shiil kaga taalba.
Sideydii haduu shaar libaax harag shabeel qaatay.
Shulah haduu maro wad dhigtoo shaal garbah sartay.
Shirib hadeey lasoo wad tunteen sharic iyo toonka.
Hadaan shaamreer dhicin ilamd sharibad qooyso.
Maxaa shalay inoo waday hadaan sheeko ku idlaanin.
Shalaayto iyo haraan hadaan lagu sharkoobin.
Shirka odaydii dhigay hadaan shaaca laga qaadin.
Baqaarad hadaan la iska shabin sheeyna lag qaato.
Hadaan bahal kushirin mayd wadad shalay ku ruux waayay.
Shan iyo toban hadaan habaqle dhaxay shoorka jabin waayin.
Bada dad isku sii shubay hadaan moori kula shiidin.
Shixnadihii iyo hadaan donyihii laisku shubi waayin.
Shuf hadaan lanoqon ebaheey loo shukriyi waaye.
Shab hadaan la oran otangadii shaly la oodeeyay.
Shafkeey kacayshee xero hadaan shaah lagu iibin.
Shiraac iyo hadaan teendho iyo kaar lawada sheegan.
Shirqoolka iyo hadaan damac iyo kibirku shaashoobin.
Showshoowda badan iyo hadaan shoorku socon waayin.
Shuruubah hadaan lagal baqin shegashda ciida.
Haduusan shadafah kaguran koonfur shacbkiinu.
Ama eeysan shaqalo iyo noqon sheegad nal jooga,
Sidinaan shiraac doon leh iyo shuud kusoo galay.
Sharafkaan ku dhadanhayna iyo shicirku waa beene.
Sheeb iyo shabaab nabdii hadii showri lagu tuuray.
Oo uu shirka u yahay hartigu wado Shacuubtiisu
Ama eey shufta u wad yihiin shuushka bixi waayay.
Shiinah dad le,eg waadinkii sheegan jiray waaye,
Waxaan soo shamiray xoogagii idinka shelnaaye.
Shankaroorta gorteey sidii buda idiin shiido ,
Am laisku kiinsoo shafoo faro la idiin sheegto,
Shinbiro saa tihiin uu galeer aad u shabkeeyay.
Shabad weeye kugu taal in aad shagax dhaheysaan,
La’ iskuma Shabaho darjo aan kugu Sharifneen.
Shafka looma tumo geesinimo aan shisho aheen.
Shaxshax maahan meel lagu shuf baxay in aad shirnataan,
Idinkoo shalwady baad guryihii sii sharxateene.
Niman sida guurtad shinidaad kugu shamuumaayo.
Oo wax eey ku shaximanyihii aana lashegeynin .
Shakilad waxaa kaa dagay ciidan kuu shaxaye,
Kuwii ugu shideysnaa ayaa sheeda kaa tubane.
Kol haduuba shiishkoodu yahay shaafka aw magan ah
Shantarkaan jubad hoose waa kaa shramahayaa.
Inta eeya shacuurtu is badalin oo shaagu soconaayo.
Majerteen halkaad shaly katimid shaahid ugu guuro,
Iskuna shuba shilabteed bari shekadii xiraye.
gabaygaana noo keena niman yahow ama naga daaya bahasha anaga marabno ogaadeen iyo majeerteen u kala tartamaya mareexaane.
Reply »	Gargaar says:	February 22, 2013 at 6:40 pm	Asc, waxaan oo kale waa waxa ummadda isku sii diraya, in meelahaan oo kale lasoo galiyona maahan.
waxaa ila haboon in aan ka qayb qaadanao sidii ummadeenu isku raaci lahayd in aan ka qayb qaadano dhamaanteen, taas macneheedu waa in aan iska ilaalino waxkasta oo dad isku diraya! waad mahadsantihiin
Reply »	ikhyaar says:	February 22, 2013 at 6:53 pm	CODSI;allgalgaduud fadlan sxbyaal gabaygaan noo daabaca oo isaga oo qoraal ah noo soo dhiga waa muhiim oo dad badan dhagaysiga kuma fiicna WIXII QORAN BAA QAARUUMO HAREE MAXUU HADAL QIIMO LEEYEHAY.